VaMangudya Vooneswa Ndondo neNhengo dzeParamende muBulawayo
Zvakapedzisira Kubudiswa Mbudzi 08, 2018
Nyaya yekushandiswa kwema bond notes munyika yatsviriridza pamusangano wekuzeya bhajeti renyika regore rinouya uri kuitirwa muBulawayo dzimwe nhengo dzeparamende dzichiti kushandiswa kwemari iyi kunofanirwa kumiswa zvachose nekukasika.
Gavhuna weReserve Bank of Zimbabwe, VaJohn Mangudya, vabvunzurudzwa pamusoro pema bond notes dzimwe nhengo dzeparamende dzichiti hadzisi kufara kuti munyika murambe muchishandiswa mari iyi sezvo iri iyo iri kuwedzera matambudziko ari kuitika munyika.
Vachitaura pamusangano wekuzeya bhajeti regore rinouya, nhengo dzeparamende dzaratidza kusafara kwadzo nekuita ruzha apo VaMangudya vange vachitaura izvo zvaita kuti mutauriri weNational Assembly, VaJacob Mudenda, vapindire vachikumbira vadare ava kuti vape VaMangudya mukana wekutaura.
Nhengo yedare reSenate, Amai Lillian Timveos, vati veruzhinji vari kushushikana pakuti ndeipi mari chaiyo iri kushandiswa munyika vachitiwo zviri pachena kuti mabond notes haazi kubatsira.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvemari, VaFelix Mhona, vaudza Studio7 kuti zvimwe zvakabuda mutsvakurudzo yavakaita muvanhu pamusoro pezvavanoda kuti zvigadziriswe mubhajeti yegore rinouya inyaya yekuti vanhu vanoda kuti ma bond notes abviswe koshandiswa mari yekunze imwe chete inove marhanzi ekuSouth Africa, kana kuti madhora ekuAmerica.
Asi VaMangudya, avo vakambotaura kuti vaizosiya basa kana ma bond notes atadza kushanda zvakanaka, varamba kuti matambudziko ezvehupfumi munyika ari kukonzerwa nema bond notes aya.
Vati nyaya yekuti hurumende iri kushandisa mari yakawanda kupfuura yainowana, kana kuti budget deficit muChirungu, ndicho chinhu chikuru chiri kuitisa kuti hupfumi husagadzikana.
Gurukota rezvemari, Professor Mthuli Ncube, vabvuma kuStudio7 kuti kushandisa mari zvisina mwero kwehurumende idambudziko guru uye vari kuita zvose zvavanogona kugadzirisa dambudziko iri.
Professor Ncube vazivisawo musangano uyu kuti mubhajeti regore rinouya serimwe rematanho ekuedza kurerutsira veruzhinji, hurumende ichatora danho rekubvisa mitero pasanitary-ware.
Imwe nhengo yeparamende pasi pechikamu cheproportional representation, Amai Priscilla Misihairabwi-Mushonga, vati vafara zvikuru nedanho iri.
Vachivhura musangano uyu zviri pamutemo, VaMudenda vati vamiriri veparamende vanofanirwa kushanda pamwe chete nehurumende mukubuda nebhajeti rinoita kuti hupenyu hweveruzhinji rwuve nani.
VaMudenda vakurudzirawo kuti hurumende isiyane netsika yekunonoka kuita zvinhu zvainofanirwa kuita vachiti kuita kwakadaro kunodzorera nyika kumashure.
Musangano wekuzeya hurongwa hwekushandiswa kwemari yehurumende hwegore rinouya uri kupindwawo nemamwe makurukota ehurumende akasiyana-siyana uye unopera nemusi weMugovera.